चीनबाट लस्कर लाग्दै नेपाल भित्रिए सय वटा विद्युतीय कार – Kavrepati
Home / समाचार / चीनबाट लस्कर लाग्दै नेपाल भित्रिए सय वटा विद्युतीय कार
admin4weeks ago	समाचार Leaveacomment 135 Views
काठमाडौँ । यातायातको पहुँचलाई सरलीकृत गर्न नेपाली व्यापारी तथा व्यवसायीले उत्तरी नाका रसुवागढीबाट चिनियाँ विद्युतीय कार आयात गर्न थालेका छन् ।
Previous भ्रष्टा, चारको अ’भियोग लागेका ट्रा, फिक प्रहरी हाकिमको घरमा सुनको ट्वा, इलेट !
Next अनौंठो प्रेम ! सेनाका जवानसँग प्रेम भएपछि पतिलाई दिईन् डिभोर्स , छोरी जन्मेपछि सेनाका जवानले भने ‘तलाई म चिन्दिन’